ရှားပါးစားရင်းဝင် အပျိုကြီးဖြစ်ရခြင်းရဲ့ မဟာ အားသာချက် (၅) မျိုး
July 20, 2019 Cele Love 0
ရှားပါးစားရင်းဝင် အပျိုကြီးဖြစ်ရခြင်းရဲ့ မဟာ အားသာချက် (၅) မျိုး လောကမှာ အပျိုကြီးဆိုတာ ရှားပါးစာရင်းဝင်တွေပါ။ လူတော်တော်များများကလည်း အပျိုကြီးဆိုရင် နောက်ပြောင်ဖို့၊ ကျီစယ်ဖို့လောက်ပဲ တွေးပြီး သူတို့မှာ ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ အားသာချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ မသိကြပါဘူး။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အပျိုကြီးဖြစ်နေတဲ့ သူတွေပဲသိနိုင်တဲ့၊ ရနိုင်မယ့် အားသာချက်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုပါ။ […]
လက်ဝါးမှာ Mပုံစံပါသူလေးများ ဖတ်ရန်
လက်ဝါးမှာ Mပုံစံပါသူလေးများ ဖတ်ရန် လက် ဖ၀ါး နှစ်ဖက်ကို ပူးကြည့်လိုက်ပါ။ အခုလိုမျိုး M ပုံစံလေး ဖြစ်ေ်နရင်တော့ ဒီစာလေးကို ဖက်ကြည့်လိုက်အုံးနော် ……. ဒီလို M ပုံစံမျိး ဖြစ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တခြားဆောင်းပါးတွေ၊ ၀ဘ်ဆိုက်တွေမှာလည်း အများအပြားဖော်ပြ ထားကြပါတယ် …။ နှလုံးလမ်းကြောင်း၊ […]
” ပိုင်တံခွန်ကို ချစ်တယ်လို့ဖွင့်ဟလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် “
” ပိုင်တံခွန်ကို ချစ်တယ်လို့ဖွင့်ဟလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် “ သင်ဇာဝင့်ကျော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေထဲက တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အလှဆုံးမင်းသမီးတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။သင်ဇာ့ကို ပိုင်တံခွန်နဲ့ မကြာခဏတွဲတွေ့ရပြီး ကြော်ငြာတွေ ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်း လိုက်ဖက်ညီစွာသရုပ်ဆောင်ထားကြတာတွေ့ရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေက ပိုင်တံခွန်နဲ့ သဘောတူတယ်လို့ စနောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပေမယ့်ပိုင်တံခွန်နဲ့ သင်ဇာကတော့မောင်နှမတွေလိုမျိုးခင်တာလို့ပဲ အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ မကြာသေးမီက MC နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပိုင်တံခွန်နဲ့ […]
ရေနှစ်နေတဲ့ ကလေးကို ဘယ်သူမှသတိမထားမိဘဲ ဝင်ကယ်တဲ့ Deliver လေး (Video)
ရေနှစ်နေတဲ့ ကလေးကို ဘယ်သူမှသတိမထားမိဘဲ ဝင်ကယ်တဲ့ Deliver လေး (Video) ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ စာရှုသူများခင်ဗျာ.. စာဖတ်ပရိသတ်များကို ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ အင်မတန်မှကို လူကြည့်များပြီး ၊ လူအများက ကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်ချက်တွေပြုထားတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးလည်း ဖြစ်သလို ၊ ကလေးတွေကို (ဆော့ပါစေဆိုပြီး) ပစ်ထားပြီး ဖုန်းသာပွတ်နေတတ်တဲ့ […]
အင်​တာဗျူးမှာ အမှန်​တရား​တွေဖွင့်​ချလိုက်​ပြီဖြစ်​တဲ့ ဗစ်​တိုးရီယားရဲ့ ဖခင်​
အင်​တာဗျူးမှာ အမှန်​တရား​တွေဖွင့်​ချလိုက်​ပြီဖြစ်​တဲ့ ဗစ်​တိုးရီယားရဲ့ ဖခင်​ နေပြည်တော် သပြေကုန်းမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းက အသက် ၃ နှစ်မပြည့်သေး တဲ့ မိန်းကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယား (နာမည်ရင်းမဟုတ်) ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၁၆ ရက်နေ့က အဓမ္မ ပြုကျင့်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်က […]
(၁၀)တန်းကျောင်းသူလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်၊ သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ တရားခံတွေကို ယနေ့စီရင်ချက် ချလိုက်ပါပီ ….
(၁၀)တန်းကျောင်းသူလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်၊ သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ တရားခံတွေကို ယနေ့စီရင်ချက် ချလိုက်ပါပီ …. မသေမချင်း လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ် သတ်မိန့်ချလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ကျိုင်းတုံတွင် ဆယ်တန်းကျောင်းသူကို အဓမ္မပြုကျင့်၊ သတ်ဖြတ်ပြီး အလောင်းကိုမီးရှို့ ဖျောက်ဖျက်ခဲ့သည့် စိုးလွင် (၄၀ နှစ်) နှင့် စိုင်းရှဲန် (၂၉ နှစ်) […]
သားဦးလေးကို နာမည်မပေးရသေးဘူးဆိုတဲ့ အောင်သူ…
သားဦးလေးကို နာမည်မပေးရသေးဘူးဆိုတဲ့ အောင်သူ… မြန်မာလက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ပိုးအိအိခန့်တို့စုံတွဲလေးကတော့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားနေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အားကျရတဲ့ သူတို့စုံတွဲလေးက နှစ်ကိုယ်တူဘဝလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော် …။ ယခုမှာတော့ အောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး […]
မိုးကြီးနေတဲ့ချိန် ဓာတ်တိုင်ကို သွားကိုင်မိလို့ (၃) ယောက် ဆက်တိုက် ဓာတ်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
မိုးကြီးနေတဲ့ချိန် ဓာတ်တိုင်ကို သွားကိုင်မိလို့ (၃) ယောက် ဆက်တိုက် ဓာတ်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် အထူးသတိထားကြပါ …။ မိုးကြီးနေတဲ့ချိန် ဓာတ်တိုင်ကို သွားကိုင်မိလို့ ၃ ယောက် ဆက်တိုက် ဓာတ်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာ တွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ […]
” အ၀တ်ဗလာနဲ့ ရေချိုးနေတဲ့ ပုံတွေတင်လိုက်တဲ့ မော်ဒယ်နန်းမွေစံ “ ဆက်ဆီကျကျ ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့် ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များနေတာကတော့ မော်ဒယ်နန်းမွေစံ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သူကတော့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ် အလှတွေကြောင့် သူ့ပုံရိပ်တိုင်းကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ ရင်ခုန်စရာကောင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း ဝေဖန်မှုတွေ […]
” သမီးကို သေတဲ့ထိ မတွေ့ဘူးလို့ အပြတ်သားဆုံးပြောလိုက်တဲ့ ကစ်ကစ် “
” သမီးကို သေတဲ့ထိ မတွေ့ဘူးလို့ အပြတ်သားဆုံးပြောလိုက်တဲ့ ကစ်ကစ် “ ကစ်ကစ်ဟာ ကျောက်ကပ်ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်နေရပြီးဆေးရုံပေါ်မှအသည်းအသန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ် …။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မင်းသမီးခင်သဇင်နဲ့ ပြုစုတဲ့လူတွေ အလှူရှင်တွေရဲ့အားနဲ့ ပြန်ပြီးရောဂါသက်သာလာခဲ့ပါတယ်။ ကစ်ကစ်က မကြာသေးမီက အကုန်သိမီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာ သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခံစားရတာတွေနာကျင်ရတာတွေကိုရင်ဖွင့်လာခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ် …။ ကစ်ကစ်က […]